Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuhlolwa koMhlaza weProstate: Madoda, Ixesha ngoku
UNovemba lixesha lokuba onke amadoda, kuquka namagqala, ahlole impilo yawo. I-HALO Diagnostics, uvulindlela ekufumaneni umhlaza we-prostate kunye nonyango, ukhuthaza amadoda angama-45 + ukuba ahlole rhoqo i-prostate.
Malunga nama-250,000 amadoda aya kufunyaniswa enomhlaza wedlala lobudoda ngonyaka - malunga ne-11,000 yabo bafunyaniswayo bakwinkqubo yoLawulo lweMpilo yamagqala kuphela.
"Ukuhlola kunciphisa izinga lokufa komhlaza wesifo seprotate nge-25-30%," kusho uDkt John Feller, igqala kunye neGosa eliyiNtloko lezoNyango kwi-HALO Diagnostics.
UDkt Feller uncoma ukuba ii-vet zincedane zikhumbule ukubaluleka kokuhlolwa kwe-prostate kumadoda angama-50-75 ubudala (iminyaka eyi-40-45 ubudala kumadoda asengozini enkulu). Wongeza, "Ukukhathalela amagqala kuhlala kundikhumbuza ngeemvakalelo ezinzulu zoluntu kunye nenjongo onke amagqala abelana ngayo."
UMichael Crosby, iCEO yeVeterans Prostate Cancer Awareness Foundation kunye nomnye wabaguli bakaGqr.
UCrosby wongeza, "Yenza idinga kunye nogqirha wakho wokhathalelo oluphambili lonyango lonyaka, kubandakanya uvavanyo lwegazi lomhlaza wedlala lesinyi, uvavanyo lwe-digital rectal, kunye nengxoxo malunga nomhlaza wedlala lesinyi."
I-HALO Diagnostics inikeza ukuhlolwa kwe-prostate kwindawo ye-HALO e-Indian Wells, eCalifornia, kunye ne-HALO ye-Prostate Laser Centre e-Houston, eTexas.
• Uvavanyo lwe-PSA: Iyacetyiswa kuwo onke amadoda ama-50+ kunye namadoda angama-45+ anembali yosapho yomhlaza wesibeleko.
• I-Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI): ii-mpMRIs sisixhobo sokuhlola esikwinqanaba eliphezulu ngokuchaneka okukhulu kwaye zahlula phakathi komhlaza ondlongondlongo kunye nokhula kancinci.
• I-Liquid Biopsy: Uvavanyo lomchamo oluvavanya umngcipheko wamadoda wokuba nomhlaza wedlala lobudoda obalulekileyo ngokwezonyango okanye wodidi oluphezulu. Isetyenziswe ngaphambi kwe-mpMRI kunye nangaphambi kwe-biopsy.